Mgbe ezigbo ndị enyi gị chọrọ ka ị gbaa ọgwụ mgbochi ...
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Mgbe ezigbo ndị enyi gị chọrọ ka ị gbaa ọgwụ mgbochi…
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Education • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Mgbe ezigbo ndị enyi gị chọrọ ka ị gbaa ọgwụ mgbochi…
Ndị America na-atụfu ndị enyi maka ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19
Ntuli aka ahụ gosipụtara na 97% nke ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi na-ele ndị enyi mbụ ha anya dị ka '' anti-vaxxers zuru oke '' ma kwuo na ha agaghị enwe ike mee ka ha ghọta mkpa ọ dị ịgba ọgwụ.
14% nke ndị America gbara ọgwụ mgbochi nwere mmekọrịta enyi na ndị kwụsịrị ịgba ọgwụ mgbochi.
81% nke ndị na -aza ajụjụ nyocha Democrat kwuru na a gbara ha ọgwụ mgbochi.
64% nke ndị zara ajụjụ nyocha Republican kwuru na a gbara ha ọgwụ mgbochi.
Ntuli aka mba ọhụrụ, nke emere na mbido Septemba, kpughere na 16% nke ndị bi na US bụ ndị sonyere na nyocha ahụ akwụsịla ọbụbụenyi atọ n'ime afọ na ọkara gara aga. Ihe dị ka 14% nke ndị America gbara ọgwụ mgbochi kwuru na ha esorola ndị enyi ha kpebiri ịghara ịgba ọgwụ mgbochi megide COVID-19.
Ndị America na-atụpụ ndị enyi na ndụ ha n'oge nsogbu coronavirus, yana maka ndị họọrọ ka a maa jijiji, ọnọdụ ndị enyi na ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 na-abụkarị ndị na-emebi mmekọrịta.
N'ezie, ndị nabatara ọgwụ mgbochi ọrịa nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu anọ ka ndị na -ebughị n'obi ịnweta jabs - 66% ruo 17% - akwụsịla ọbụbụenyi n'oge ọrịa. Ntuli aka ahụ gosipụtara na 97% nke ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi na-ele ndị enyi mbụ ha anya dị ka '' anti-vaxxers zuru oke '' ma kwuo na ha agaghị enwe ike mee ka ha ghọta mkpa ọ dị ịgba ọgwụ.
Ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 bụ otu n'ime okwu kacha ekesa nke na -ebute ọgbaghara n'etiti ndị Amerịka. 14% ndị zoro aka na ya dị ka ihe kpatara ịkwụsị ọbụbụenyi ma e jiri ya tụnyere 16% ndị boro ebubo esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị yana 15% onye enyi mbụ ya na onye ọlụlụ mbụ. Ihe ndị ọzọ gụnyere ịchọpụta ndị enyi ha bụ ndị ụgha (7%) yana inwe enyi mee akụkọ gbasara ha (12%).
O doro anya na Hollywood agọziela echiche ịtụfu ndị enyi jụrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Onye na -eme ihe nkiri Jennifer Aniston - ihe ijuanya, kpakpando nke usoro telivishọn 'Enyi' - kwuru n'ọnwa gara aga na N'ajụjụ ọnụ magazin InStyle na ọ kwụsịrị mmekọrịta ya na ndị jụrụ ka a maa jijiji ma ọ bụ họrọ ịghara ịgwa ya ọnọdụ inoculation ha. Ọ sịrị, “Ọ bụ ihe ihere n'ezie. “Mmadụ ole na ole furu efu n'ihe m na -eme kwa izu.”
Onye na -eme ihe nkiri Jennifer Aniston
Ọkwa ọgwụ mgbochi vitriol arịala elu n'izu ndị na -adịbeghị anya. Onye mgbasa ozi redio Howard Stern gbarụrụ nso nso a "ụzọ niile ** na mba anyị na -agaghị agba ọgwụ mgbochi" ma kwuo na ekwesịrị ịjụ ndị na -enwetaghị ọgwụ mgbochi akwa ụlọ ọgwụ ma ọ bụrụ na ha daa ọrịa. Ọ sịrị, "Nọrọ n'ụlọ, nwụọ ebe ahụ na COVID gị."
Igwe egwu redio Howard Stern
New kwuru na 81% nke ndị na -aza ajụjụ nyocha Democrat gbara ọgwụ mgbochi nke ọma, ma e jiri ya tụnyere 64% nke ndị Republican na 69% nke ndị nọọrọ onwe ha. Ihe dị ka 57% nke ndị Republican na 41% nke ndị Democrats kwuru na ọha mmadụ “dị oke nkpa” maka ndị America agbabeghị ọgwụ.
Ndidi maka nnwere onwe nke ịgba ọgwụ mgbochi na -ebelata n'ime USA, dị ka Onye isi ala Joe Biden n'izu gara aga nyere iwu ka ụlọ ọrụ niile nwere 100 ma ọ bụ karịa ndị ọrụ manye ndị ọrụ ha ka ha gbaa ya. "Anyị enweela ndidi, mana ndidi anyị dị gịrịgịrị, ọjụjụ ọjụjụ gị furu anyị niile ọnụ," Biden kwuru maka ndị Amerịka na -agbanyeghị ọgwụ mgbochi.
Jamaica Tourism na-akpọ maka echiche sitere n'aka ndị isi ụwa ...
Lufthansa na-ebuputa Airbus A321s abụọ kpamkpam ...
Ịchekwa ụlọ kwa ụbọchị na họtel emechaala nwụọ?
Ngwa ngwanrọ kachasị mma na ngwaọrụ ntanetị maka njem na ...
Egwu nke COVID-19 Ọdịiche dị na ọdịda
Minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Jamaica: Njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ na -aga n'ihu ...
Enweghị mgbochi: Russia maliteghachi ụgbọ elu zuru oke na ...
Lufthansa ijiji 76,000 ndị si Frankfurt Airport ...
N'oge na-adịghị anya, ụgbọ elu US ga-achọ ịkwụghachi ụgwọ maka ...
Ọnwụ a na-apụghị ịgbagha agbagha: Liverpool kagburu UNESCO World ...